प्रधानमन्त्रीले दिए भिडियो सन्देशबाट नयाँ वर्षको शुभकामना, कोभिड-१९ को अन्त्य नभएसम्म पारिश्रमिक नलिने घोषणा ! [पूर्णपाठ] – Sagarmatha Online News Portal
प्रधानमन्त्रीले दिए भिडियो सन्देशबाट नयाँ वर्षको शुभकामना, कोभिड-१९ को अन्त्य नभएसम्म पारिश्रमिक नलिने घोषणा ! [पूर्णपाठ]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना भिडियो सन्देशबाट दिँदै अहिले मानवजातिका लागि खतराका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।
भिडियो मार्फत दिएको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदासम्म आफूले पारिश्रमिक नलिने बताएका छन् । आफ्नो पारिश्रमिक बापतको रकम कोभिड-१९ रोकथामका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन् ।
खाँचो परेका बेला आफूले कम खाएर पनि अरुलाई खुवाउने परम्परा रहेकाको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त नभएसम्म मैले आफ्नो पारिश्रमिक कोभिड-१९ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको प्रगतिमा हुने उपलब्धीको न्यायोचित वितरण र अप्ठ्यारोमा हुने क्षतिको सह–भारवहन सबैले मिलेर गर्नुपर्ने बताएका छन् । देशभित्रको संकट व्यवस्थापनमा एकताबद्ध राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका छन् । विश्वमै संकट उत्पन्न गरेको कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्यका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य अत्यावश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले देशबासीलाई दिएको शुभकामना सन्देशको पूर्णपाठः
– यतिखेर देशभित्र र बाहिर रहनु भएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई मेरो कामना छ- तपाईँ र तपाईँका परिवारजन र आफन्तहरू सबै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्नुहोस् ! जसलाई सङ्क्रमण भएको छ, उहाँहरुले यसमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहोस् ! अनि, कोरोना भाइरसको विश्व महामारीबाट सिङ्गो मानव जातिसहित हामी नेपाली पनि छिट्टै मुक्त हुन सकौं ! यस भाइरस विरुद्धको जारी ‘युद्ध’को अगुवाइ सरकारले गरिरहेको छ । हरेक दुःखका पलहरुमा हामीले तपाईँहरुको हौसलापूर्ण साथ, सहयोग र सद्भाव पाएका छौं । आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण देशवासीहरुको निरन्तर साथ रहनेमा सरकार विश्वस्त छ ।
– यतिबेला नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को उल्लास फैलिरहेको हुने थियो । वर्षभरि २० लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण गर्ने अभियानका रुपमा होमस्टे, होटल र रेष्टुराँहरु भरिभराउ हुने थिए । शहर-बजार, टे«किङ स्थल र पर्वतारोहणका गन्तव्यहरुमा पर्यटक र पर्वातारोहीहरुको चहलपहल व्यापक हुने थियो ।
-कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले हामी भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । मेरो पछिल्लो पटकको संबोधनदेखि यताको पाँच दिनको यस अवधिमा थप ३५ हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मानिसको जीवन रक्षाका लागि सिङ्गो विश्व अहिले ‘लकडाउन’मा छ । हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरु लकडाउनमा छन् । कतिपय परिवारका सदस्यहरु आफन्तबाट टाढा लकडाउनमा छन् । सङ्क्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि एकै ठाउँमा रहेर पनि कतिपय हामीहरु पारस्परिक दूरीमा छौं ।
-निःसन्देह, दुःखको यस घडीमा हामीभित्रको मानवीय भावनाले हामीलाई अझ दह्रो गरी जोडिरहेको छ । सिङ्गो नेपाली समुदाय राष्ट्रिय एकताको भावनात्मक एकतामा अझ घनिष्ट रुपमा आवद्ध भएको छ । तर भौतिक रुपले भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने धागो टुटेको छ । सिङ्गो विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई गतिशील बनाइराख्ने उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको छ । अन्योल र भयको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट अहिलेको समय गुज्रिरहेको छ ।
-म अहिले पाँच वर्ष अघिको त्यो कोलाहलपूर्ण अवस्था पनि संझिरहेको छु । त्यतिखेर विनाशकारी भूकम्पका कारण हाम्रा धेरै घरहरु ध्वस्त भएका थिए । आफू उभिएको भूँइ घरीघरी नाचिरहेको अवस्था थियो । अस्पतालहरु घाइतेहरुबाट भरिभराउ थिए । कति उद्धारको अपेक्षामा चिच्याइरहेका थिए । कोही आफन्तको वियोगमा भावविह्वल थिए । न बस्ने ठाउँ छ, न सञ्चित गरिएका खानेकुरा बाँकी रहेको छ- घरबाट मानिस एकाएक सडकमा प्mयाँकिएका थिए ।
– त्यतिबेलाको अत्यासलाग्दो अवस्थालाई हामीले एक भएर सामना ग¥यौं । धैर्यता र साहसका साथ उभियौं, अघि बढ्ने प्रयास गर्यौं । हजारौं भौतिक संरचना भत्किए पनि हामीले मनोबल भत्किएन दिएनौं, सङ्कटका काला बादलहरु हटेर सूर्यको उज्यालो छरिने विश्वासलाई टुट्न दिएनौँ । त्यसपछि आएका सबै अप्ठ्याराहरुलाई एक भएर एकएक गरी छिमल्दै गयौं । प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालीहरु भौतिक संपत्तिका हिसाबले कमजोर भए होलान्, तर मानसिक रूपमा दरिद्रचाहिँ छैनन् भन्ने परिचय हामीले साहसका साथ दियौं । हामीहरुको यो साहस र धैर्यतालाई धेरैले प्रशंसा गरे, हामीलाई धुलो टक्टक्याएर उठ्न हात दिए । हामी नेपालीले परेको बेलामा प्रदर्शित गर्ने गरेको एकता र अनुशासनले नै भत्किएको धरहरा फेरि ठडिन लागेजस्तै शीर ठाडो पार्ने स्थानमा आइपुगेको स्मरण गर्न म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
– हामीले यो युद्ध जित्नका लागि त्यसबेलाको भन्दा भिन्न ‘युद्धका नियम’हरु पालना गर्नु आवश्यक छ । यस युद्धमा ‘दूरीमा शक्ति’ छ, दूरीबाट नै हाम्रो एकता प्रदर्शित हुन्छ भन्ने जस्तो नियमको पालना गर्नुपर्ने अनौठो अवस्था आएको छ । एक्लाएक्लै उभिंदै सामाजिक दूरी कायम राखेर अदृश्य शत्रु- कोरोना भाइरसलाई छल्नु पर्छ भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । अहिले जो जहाँ छ, त्यहीँ रहने, स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिएका सुझाव र सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरुको पालना गर्दै स्व-अनुशासनमा रहने र कोरोना भाइरसको चक्र समाप्त हुने अवधिसम्म धैर्यताका साथ पर्खिने नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ ।
– हाम्रो योजना थियो- यस नयाँ बर्षमा, नयाँ बर्षको पहिलो महिनाको पूर्वाद्धधमै रानीपोखरी उद्घाटनको कार्यक्रम राखिने छ । यस्तो लाग्दै थियो- धरहरा १० तल्लामा मात्रै होइन, त्यसभन्दा माथि अग्लिने छ । सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको ठेक्का लगाउने काम सकिने छ । सार्वजनिक यातायातमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिने छ । गत फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा मैले संबोधन गर्दा उल्लेख गरिएका कामको विवरणको प्रगति आजको संबोधनमा अपडेट गरिनेछ ।
– त्यसैले अहिले यतिबेला हामीले आफ्नो ध्यान संक्रमितहरुको पहिचान, परीक्षण अनि उपचारमा केन्द्रित गरेका छौं । जतिबेला हामी यस महामारीको ‘ग्राफ’लाई सीधा पार्छौं- त्यसपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधिलाई तीब्रता दिन ‘लगानी, लगानी अनि फेरि लगानी’को नीति अपनाउने नै छौं । अहिले हाम्रो अध्ययन तथा सर्वेक्षण, ‘टुटेको उत्पादन सम्बन्धको कडी फेरि कसरी जोड्ने, अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई कसरी सुचारु गर्ने ?’ भन्नेमा केन्द्रित छ । यसै अध्ययन र सिफारिसको आधारमा सरकारले ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्याकेज’ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने छ ।
– मैले पटकपटक भन्दै आएको छु, यो युद्ध सबैको बलियो एकतामा जितिने युद्ध हो । विश्वव्यापी यस संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव छ । देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा एकताबद्ध राष्ट्रिय प्रयास सर्वाेपरि रहनुपर्छ । मुलुक प्रगतिमा रहेको बेला हुने उपलब्धिको न्यायोचित वितरण र अप्ठ्यारोमा हुने क्षतिको सह–भारबहन हामी सबैले नै मिलेर गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा ‘हुनेको गास काटेर, नहुनेलाई बचाउने’ त हाम्रो परम्परा पनि हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले कोरोना महामारी समाप्त नभएसम्म मैले आफ्नो पारिश्रमिक ‘कोभिड-१९, प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छु ।
– कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ । सबैभन्दा पहिले जनतालाई महामारीबाट उम्काइने छ, सँगसँगै रोजीरोटीको जोहो गरिने छ । सर्वसाधारण जनता र कमजोर वर्गलाई यथासंभव सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, यस समस्याबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, कृषक तथा आम श्रमिकहरुको आय निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु- आफैलाई जोखिममा राखी उपचारमा सङ्लग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु र नागरिक सुरक्षामा अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मी जस्ता यस युद्धको अग्रपङ्क्तिका योद्धाहरुको व्यक्तिगत र व्यवसायिक सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिइने छैन । उहाँहरुको हिफाजत सरकारले हरतरहले गर्नेछ ।
– सङ्कटको यस घडीमा जनताको घर आँगनमै पुगेर सेवा पुर्याइरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसले स्थानीय तहहरुलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । आफ्नो प्रदेशको विशिष्ट अवस्था र चुनौतीलाई हेरेर प्रभावकारी ढङ्गले संभाव्य सङ्क्रमणको सामना गरिरहनु भएका प्रदेश सरकारहरुको भूमिकालाई म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
– चैत २५ गते मैले भनेको थिएँ- यस खालको महामारीसँग जुझ्न समग्र विश्वको तयारी पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रत्यक्ष देखिएको छ । मानव स्वास्थ्यमा उच्च लगानी गर्ने नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । यस महामारीको समाप्तिसँगै मानवकेन्द्रित नयाँ विश्व प्रणालीका बारेमा विमर्शको पनि थालनी गर्नुपर्छ । नेपालले यसमा अग्रसरता लिने छ ।
– कुनै पनि युद्धमा विजयका लागि आत्मविश्वास, मनोबल र एकता सर्वा्धिक महत्वपूर्ण हतियार हुन् । आत्मविश्वास गुमेको र आत्मबल खस्किएको सेनाले जतिसुकै आधुनिक संशाधनबाट सज्जित भए पनि युद्ध जित्न सक्दैन । यस घडीमा म सबैसमक्ष विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु- अग्रमोर्चामा रहेर कोरोना भाइरसका विरुद्ध कठीन लडाइँको अगुवाइ गरिरहेकाहरुको मनोबल उच्च पारौँ, राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ पारौँ र कोरोना भाइरसलाई समाजमा फैलिनबाट रोक्न र सङ्क्रमण भइहालेमा पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने जनताको आत्मविश्वासलाई थप बलियो बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलौं ।
– आगामी बैशाख ३ गते लकडाउनको दोस्रो समयावधि पूरा हुन्छ । यिनै दुई दिनको अवधिमा हुने प्रगतिको आधारमा कोरोना-महामारी विरुद्धको हाम्रो नीति कस्तो हुने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने छ । ढुक्क होऔं, कस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आपूर्ति प्रणालीलाई कमजोर हुन दिइने छैन ।